Krishnap.com.np: Computer Professional Certification भन्नाले के वुझिन्छ?
Computer Professional Certification भन्नाले के वुझिन्छ?
खासमा भन्नुपर्दा Computer Professional Certification भन्नाले एउटा एस्तो प्रमाणपत्रलाइ बुझिन्छ जसले तँपाइलाइ computer को कुनैक्षेत्रको ग्याताको रूपमा विश्बमान्यता दिन्छ। वास्तबमा भन्नुपर्दा तपाइलाइ computer मा चलाउन अथवा computer मा काम गर्न अाउछ भन्नकोलिगि विषेश किशिमको प्रमाणपत्र भन्नु पर्छ।
विश्वमा धेरै विधामा online exam दिन पाइन्छ। त्यसमा कसको के महत्वछ भन्ने बुझ्न जटिल हुन्छ। अझ कुन परिक्षा दिनु राम्रो हो र कुन परिक्षा पास गर्दा राम्रो जागिरको पाइन्छ? यो अतिनै महत्वपुर्णा निर्णाय हुने छ सहि निर्णाय नभएमा तपाइको समय र पैसा दुबै खेर जानेहुन्छ।
खासमा तपाइको interest को field कुनहो र अहिले सम्म कुन level सम्म काम गरिसक्नु भएको छ। यावत कुराहरूले तपाइलाइ निर्णाय गर्न मद्दत गर्ने हुन्छ । यदि तपाइ यो क्षेत्रको लगि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाइ लाइ मेरो सल्लाह के हुन्छ भने पहिले CompTIA A+ र CompTIA Net + गनु राम्रो हुन्छ। यो धेरैनै राम्रो विषय सावित हुनेछ उनिहरूको लागि जो नयाँ हुनुहुन्छ । यो विषय भनेको खासै अनुभवको अवश्यक्ता पर्दैन। तर यसको मान्यता बिश्वमा राम्रो रहेको बुझिन्छ। कारण चाहि यो कुनै Product अथवा Company विषेश नभइ सवैलाइ समेटने र धैरै ठुला ठुला company हरूले मान्यता दिएको पाइन्छ ।यो Certification को लागि यो website हेर्न सक्नुहुन्छ http://www.comptia.org।
अव यसपिछको लागी चाहि तपाइ सँग निकैनै क्षेत्रहरू हुनेछन जस्तैमा MCSE, CCNA, RHCE, यस्तै Software Development तिर त्यतिकै पाइन्छ । यो छान्न भनेको त्यतिनै गाह्र हुन्छ जति तपाइलाइ college छान्न गाह्रो भएको थियो ।
मेरो मान्यता चाहि केहुन्छ भने यदि तपाइ यो भनिएक subject pass गरिसक्नु भएको छ भने कमसे कम पनि ६ महिना काम गर्नुस जसले तपाइलाइ अवको भविश्यको plan को लागि कसैलाइ नसोध्नु पर्ने उत्तर दिन्छ ।
तलको graph ले केहि मद्दत गर्ने छ । यो सम्वन्धि जानकारीको लागि
Posted by Krishna Pokhrel at 3:16 AM
Email गर्नुस र पैसा पाउनुस Microsoft ले तपाइलाइ पै...
नयाँ नेपालको सुचना प्रविधी गाइजात्रा ।
के तपाइलाइ थाहा छ तपाइको तलव विश्वमा कति छ ?
कुन हो त राम्रो र फ्रि मा पाइने Antivirus softwar...
Computer Professional Certification भन्नाले के वुझ...